Ungawasusa njani amabala eoyile kwiKhonkrithi: Iindlela ezilungileyo - Ukucocwa Kwangaphandle
Ungawasusa njani amabala eoyile kwiKhonkrithi: Iindlela ezilungileyo
Ukwazi ukuba ungawasusa njani amabala eoyile kwikhonkrithi ayisiyonto eyaziwayo ngumntu wonke. Nangona kunjalo, ukuba unemoto kunye nedrive yekhonkrithi, amathuba okuba ungachitheki ioyile awakho kwimeko yakho. Funda i-DIY hacks ukususa ioyile kwikhonkrithi yakho usebenzisa isoda yokubhaka, inkunkuma yekati, kunye necola.
Uwasusa njani amabala eoyile kwiKhonkrithi
Izinto ezininzi zokususa ioyile ziyafumanekaumgangatho wekhonkrithi. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uye kufuna imali kwezi mveliso zorhwebo, zimbalwa izixube zokucoca ioyile onokuzifumana kanye ekhayeni lakho. Kule miqobo yokucoca ikhonkrithi, kufuneka:
Isepha yesidlo sakusasa
I-TSP (Tri-sodium phosphate)
awuyi kuhoya umsebenzi we-libra man
Ibhrashi eqinileyo yokukhuhla
Ungasusa njani iRust Old kunye neNew Rust Stain kwiKhonkrithi
Ukususwa kwepeyinti ngeSandblasting
Uwafumana njani amabala eoyile kwiingubo ezinamayeza asekhaya
Ukususa ioyile egqithisileyo ngeLitter Cat
Ngaphambi kokuba uzame ukususa ibala kwikhonkrithi yakho, kubaluleke kakhulu ukususa ioyile engaphezulu kwikhonkrithi yakho. Inkunkuma yekati ilungele lo msebenzi.
Nciphisa isixa esikhulu senkunkuma yekati kwioyile entsha
Sebenzisa iinyawo zakho ukusila ibala.
Vumela ukuba uhlale ubusuku bonke okanye ixesha elide kunokwenzeka.
Sebenzisa umhlakulo ukukha inkunkuma yekati uyilahle.
Kuxhomekeka ekubeni ibala litsha kangakanani na, inkunkuma yekati inokwanela ukukulahla. Nangona kunjalo, ukuba usenamabala, qhubela phambili kokunye ukulwa namaqhinga.
Uwasusa njani amabala eoyile kwiKhonkrithi eneCoke
ICoke ayisiyokusela kuphela. Kulungile nokucoca ioyile kwikhonkrithi kunye nokufumanaumhlwa kwindlu yakho yangasese. Ngubani owaziyo? Kule recipe yeoli, bamba iCoke kunye neDawn.
Ingubo yonke ibala kwiCoke.
Yongeza isixa esikhulu seDawn.
Sebenzisa ibrashi ukukhuhla kwiisetyhula.
Susa ioyile kwiKhonkrithi ngeSoda yokubhaka
Isoda yokubhaka yenye yezona zinto zicocekileyo zokucoca ioyile. Emva kokususa ioyile kunye nenkunkuma yekati, bamba isoda yokubhaka kunye noDawn.
Nciphisa i-baking soda kwisitya. Ibala elikhulu lifuna ibhokisi yonke.
Makhe ihlale kangangemizuzu eli-15.
Yongeza izikwere ezininzi zoKusa kunye namanzi aneleyo okwenza uncamathisele.
Khuhla kunye nebrashi kwiisetyhula zemizuzu emininzi.
Phinda njengoko kufuneka kumabala anzulu.
Uwasusa njani amabala eoyile kwiKhonkrithi yokuHamba
Awunayo i-Dawn? Ungakhathazeki. Bamba isepha yakho eyimpuphu kunye nentloko kwindlela yokuqhuba.
Gubungela lonke ibala kwisepha esimpuphu.
Yongeza intwana yamanzi ukuze ibe ludaka.
Ndithanda kangakanani iikowuti zonyana wam
Sebenzisa intshukumo ejikelezayo, gcoba ibala ngebrashi.
Makhe ihlale iyure okanye ezimbini.
Hlanganisa kwaye uphinde uphinde ude ude ubonakale.
Ungawasusa njani amabala amadala eoyile kumgangatho wegaraji
Amabala amadala okanye anzulu eoyile angaziphenduliyo iindlela zekhaya, lixesha lokophula imipu emikhulu. Nangona kunjalo, imipu emikhulu iza nemingcipheko ngaphambi kokuba usebenzise i-TSP, bamba iigloves zakho kunye nemigogo.
Kwisitya, xuba ikomityi ye-TSP ngegaloni yamanzi.
Phalaza umxube kwibala.
Makhe ihlale imizuzu engama-30.
Hlikihla ngebrashi yakho kwiisetyhula zemizuzu embalwa.
Hlanganisa kwaye uphinde njengoko kufuneka.
Ngaba iWD-40 isusa amabala eoyile?
I-WD-40 iyasebenzaisikhulisi sokuthambisa igrisi. Ngamanye amaxesha, i-WD-40 ingasusa amabala eoyile kwikhonkrithi. Nangona kunjalo, ayisebenzi njengezinye iindlela kwaye ixhomekeke ekubeni indala kangakanani ibala. Ukuba unayo, unokuzama ngokuzitshiza kwibala kunye nokuyiyeka ihlale imizuzu engama-30. Khuhla ngeenxa zonke ngebrashi yakho, emva koko uyidibanise nenkunkuma yekati.
Ukucoca ikhonkrithi yakho yeoyile yeenjini
Ukuba i-oyile ye-injini ivuza kwindlela yakho yekhonkrithi, awunamathele kuyo. Endaweni yokuchitha isixa semali kwizicoci zorhwebo ngena kwi-pantry yakho.
Uqhawulo-Mtshato Gourmet Food Ukutya Plans And Programs Imihla Yokuzalwa Ukungathembeki
Ibhasi Isihloko Park
ayikwazi ukuqhagamshela kwi-wifi kawonke-wonke ye-android
ungayifunda njani inja yakho okokuqala
yintoni ukuphakama okuphakathi komntu oneminyaka eli-13 ubudala
iintlobo ezahlukeneyo zamabhabhathane anemifanekiso namagama
i-eyeshadow ijongeka inyathelo ngenyathelo ngokulula